Ngaba Uninzi Kangakanani Utywala Unokubakhokela eKhanada?
Ababhenkethi abangaphezu kwesibonelelo sabo siqu baya kuhlawula imisebenzi
Ukuba ungumvakatye eKhanada , uvumelekile ukuba ulethe ubuncinci botywala (iwayini, utywala, ubhiya okanye ipholile) ngaphandle kweli lizwe ngaphandle kokuhlawula umrhumo okanye irhafu nje kuphela:
udibana nobuncinane bokuphuza ngokomthetho kwiphondo okanye kwintsimi ongena kuyo eKhanada. Iminyaka esemthethweni yokuthenga kunye nokusetyenziswa yiminyaka engama-19 ubudala eBritish Columbia, eNew Brunswick, eNewfoundland naseLabrador, eNorthwest Territories, eNova Scotia, eNunavut, e-Ontario, e-PEI, eSaskatchewan nase Yukon; Uneminyaka eyi-18 ubudala e-Alberta, eManitoba naseQuebec.
Nceda uqaphele ukuba imithetho yenguqu, ngoko uqinisekise le ngcaciso ngaphambi kokuba uhambe.
Utywala obuninzi buvumelekile
Ungangenisa enye yezinto ezilandelayo:
1.5 ilitha (50.7 i-ounces zase-US) zewayini, kuquka i-coolerers yewayini ngaphezu kwe-0.5 ekhulwini kotywala. Oku kufana (ukuya kutsho) ama-ounces angama-53 okanye iibhotile ze-750 ml zewayini. OKANYE
1.14 ilitha (38.5 i-ounces e-US) yotywala. Oku kulingana (ukuya kutsho) kwi-ounces engama-40 okanye enye ibhodlela ephezulu yokusela kotywala. OKANYE
Ukufika kuma-8.5 ilitha yebhiya okanye i-ale, kubandakanywa ukupholisa ubhiya ngaphezulu kwe-0.5 ekhulwini kotywala. Oku kulingana nama-ounces angama-287.4 e-US okanye iiplanga ezingama-24 okanye iibhotile (i-355 ml okanye i-12.004 i-Ounces nganye yamanzi).
Ngokutsho kwe-Arhente yeeNkonzo zeCanada yaseCanada, ubuninzi bezonxilisayo onokungenisa kuyo kufuneka kube ngaphakathi kumda obekwe ngamagunya okulawula utywala-mhlaba osebenza apho uza kungena khona eKhanada. Ukuba inani lokusela kotywala ofuna ukungenisa lidlula ukuxolelwa kwakho, kuya kufuneka uhlawule umrhumo kunye neyiphi na imali efunyenweyo.
Qhagamshelana negunya elifanelekileyo lokulawula utywala loomhlaba ngolwazi olungakumbi ngaphambi kokuba ubuyele eKhanada. Uvavanyo luqala ngo-7 ekhulwini.
Ukuba amaKhanadi abuya emva kokuhlala e-US, inani lokukhululwa komntu lixhomekeka ekubeni umntu wayephume ixesha elingakanani kweli lizwe; ukukhululwa okuphezulu kunene emva kokuhlala kwama-48-iiyure.
Ngo-2012, iChanada yatshintsha imida yokukhululwa ngokukhawuleza ukufana neyo-US
Iingcebiso zokuhamba ngeNkqubo
Abaveleli bayavunyelwa ukuba bangenise kwi-$ 60 yeeCanada kwizipho zemisebenzi ngaphandle kwemvume. Kodwa utywala kunye nocuba akufaneleki ukukhululwa.
ICanada ichaza izidakwa ezinxilisayo njengeemveliso ezingaphezu kwe-0.5% yotywala ngomthamo. Iimveliso ezithile zotywala kunye newayini, ezinjengezinye izinto ezipholileyo, azidluli kwi-0.5% ngokwemvolumu kwaye, ngoko ke, ayithathwa njengotywala.
Ukuba uhamba phezu kokuxolelwa kwakho, uya kufuneka uhlawule umrhumo kwisixa esipheleleyo, kungekhona nje ukugqithisa. Kodwa iingcali kwi-ezbordercrossing.com zithi, ii-Canadian Border Service Officers (BSOs) "kufuneka zilungiselele izinto ngokulungelelanisa ngokuzibandakanya izinto eziphezulu eziphantsi kokuxolelwa kwakho kunye nokuhlawula ubuninzi kwizinto ezingaphantsi."
Qaphela ukuba ukukhululwa komntu ngamnye ngumntu ongekho kwisithuthi. Awuvunyelwe ukuhlanganisa ukuxolelwa kwakho kunye nomnye umntu okanye ukuwadlulisela komnye umntu. Iimpahla ezithengiswa ukusetyenziswa kwezorhwebo, okanye omnye umntu, azifanelekanga phantsi kokukhululwa komntu kwaye ziphantsi kwemisebenzi epheleleyo.
Amagosa enkcubeko azibala imisebenzi ngemali yelizwe oya kulo.
Ngoko ukuba ungummi wase-United States owela eCanada, kuya kufuneka uguqule imali oyihlawule ngayo i-alcohol yakho e-US ibe yimali yaseCanada kwizinga lokutshintshiselana.
Ukuba Uphumelela I-Allowance Free-Free
Ngaphandle kweeMntla eNtshona-ntshona kunye neNunavut, ukuba ungumvakatye eKhanada kwaye uze ungenise ngaphezu kwezibonelelo zomntu otywala ngokubhaliweyo apha ngentla, uya kuhlawula umgangatho weemviwo kunye nephondo kunye nommandla. Imali ovumelekileyo ukuba uyizise eCanada nayo iphantsi kwiphondo okanye kwintsimi apho ungena khona eCanada. Ukufumana iinkcukacha malunga nexabiso elithile kunye neerhafu, qhagamshelana negunya lokulawula utywala kweli phondo okanye kwintsimi efanelekileyo phambi kokuya eKhanada.
Ingxaki ekhulayo yoTywala ngokugqithiseleyo eCanada
Nangona kubekho ukukhawulelwa ixesha elide kwiindwendwe ezingenakunokuthi zizise eCanada, ingxaki ekhulayo yokunyuka nokugqithisela kotywala iphakanyisile iAlarda.
Nabani na ozama ukuzisa ubuninzi be-alcoho yaseMerika engabizi, iwayini kunye nebhiya kungabonakali kumda. Ukuhlala kwindawo yokukhululwa komntu siqu yindlela ekhuselekileyo.
Ukususela malunga nama-2000 kunye nokukhutshwa kweZikhokelo zokuNxila kotywala kotywala eKhanada ngo-2011, izikhokelo zokuqala zesizwe, abaninzi abantu baseKhanadi baye bafumana umsebenzi wokunciphisa ukusetyenziswa kotywala ngaphakathi kwebhodi. Uphando oluninzi lwenziwe malunga nokuba yingozi kangakanani na ukulinganisela ukusetyenziswa kotywala kunye nokuba nefuthe elide elide kwixesha elide kubantu abadala abaseneminyaka eyi-18/9 ukuya kwe-24, xa utywala utywala obunobungozi. Ukongezelela, ukusela ngokukhawuleza kukunyuka kwamanye amanqanaba ebemi.
Ixabiso eliphezulu loTywala lwaseKhanada litshutshiswa
Kuye kwaba nenkuthazo ekukhuthazeni ukusetyenziswa okuncinci ngokunyusa okanye ukugcina ixabiso lotywala ngokubanzi ngoncedo olunjengeentlawulo zerhafu kunye nokunyuka kwamaxabiso kumanani emali. Ixabiso elinjalo, ngokubhekiselele kwiCanada yaseCanada eSebenzisa kakubi kweziyobisi, "iya kukhuthaza umveliso kunye nokusetyenziswa kwamandla angaphantsi" iziyobisi ezinxilisayo. Ukuseka amaxabiso amancinci, i-CCSA yathi, "inokususa imithombo engabonakaliyo yobutywala edlalwa ngabantu abadala kunye nabanye abaphuza kakhulu."
Ababhenkethi baya kuhendelwa ukuba bangenise izikhululo ezininzi zotywala ezithengwa eUnited States, ezingathengisa malunga nesiqingatha semali yeziphuzo eCanada. Kodwa ukuba oko kwenziwa, izikhulu eziqeqeshwe kakuhle ze-Arhente yeeNgingqi zeCanada ziza kufumana loo nto, kwaye umoni uya kuhlolwa imisebenzi yonke loo mali, kungekhona ukugqitha nje.
Ukuba unemibuzo okanye ufuna ulwazi oluninzi malunga nokuzisa utywala eCanada, qhagamshelana ne-Canada Borders Services Agency.
Uninzi lweRhulumente eCanada
Amachiza atshisayo? I-Resiniferatoxin Ngamawaka Aphezulu Kwamaxesha Okudlula I-Capsaicin
Indlela yokuPhilisa yasendulo: I-Drum Therapy
Ngaba i-Epilover anyanisi "Inetyhefu," njengoko ifunwa kwi-Intanethi?
Inkcazo yekota yeNcwadi, iCacophony